दाई हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् ।
दाई आज एक वर्ष भइसक्यो हजुरको फोन आउन छाडेको पनि । दाई हजुरको बोली नसुनेको पनि आज एक वर्ष भइसक्यो । हजुरको बोली सुन्न धेरै मन लागेको छ । अब हामीले हजुरको बोली कहिले सुन्न पाउँछौ होला र ?दाई अब हजुरसँग भेट्न र बोल्न त पाउँदैनौ नै, तर पनि किन
किन हजुर हामीलाई भेट्न चाँडै आउनु हुन्छ भन्ने लाग्छ । हजुरले हामीलाई सधैंका लागि छोडर जानु भएको छ । तपाईले किन हामीलाई एक्लै छाडेर छाडेर टाँढा जानु भएको होला ? दाई कति निष्ठुरी हुनु भएको होला ? यस्तै प्रश्न मनमा उठिरहन्छ । माछीलाई पानीको भर भनेझै हामीलाई पनि जिन्दगीभर हजुरकै भर थियो । दाई अहिले हामीलाई हजुरको अत्यन्तै अभाव छ । जहाँ जे गरे पनि हामीलाई हजुर कै याद आउँछ ।
केही कुरको अभाव हुँदा पनि दाई हुँदाखेरी यस्तो हुँदैथ्यो, दाई खोई ? दाईले यस्तो मिठो खान दिइसिन्थ्यो, राम्रो लगाउन दिइसिन्थ्यो भनेर भाईले मसँग गनगन गरिरहन्छ । दाई म यो सब कुरा सानो भाईलाई कसरी सम्झाउँ ? दाई यो संसारमा हुनुहुन्न भनेर कसरी भनौं ?
दाई हजुरको अभाव भएको १ वर्ष हुँदा पनि हामी अझैं हजुर आउनु हुन्छ की भनेर बाटो हेरिरहन्छौं । हजुरसँग भेट हुन्छ की भनेर कहिले हजुर बस्ने ठाँउ त हजुर खाने ठाउँ पनि नियाल्छौं । यो सानो भाई हजुर नहुँदा साह्रै निरास छ । न्यास्रो मानिरहन्छ । भाईले हजुरको कुरा नगरेको दिन हुँदैन ।
आजसम्म हजुर आउने बाटो हेरेर बसेको छ । जब रात पर्छ, झ्यालबाट हेर्छौ । दाई अझैँ पनि मोबाइलमा घण्टी बज्दा कतै दाईको फोन आयो की भनेर हेर्ने गर्छु । हजुरलाई हामीले धेरै मिस गरेका छौं । दाई हजुरले हामीलाई आफुलाई भन्दा धेरै माया गरिसिन्थ्यो । तर, आज हामीबीच हजुर होइसिन्न । तर पनि किन हो किन हजुरको बाटो हेर्न मन लाग्छ, अझैं हजुर फर्किएर आउनु हुन्छ की भन्ने लाग्छ ।
जे जस्तो भए पनि दाई हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् । यो पापी दैवले हजुरलाई हामीबाट टाढा लगे पनि हजुरका यादहरु सदैव हाम्रो साथमा रहने छन् ।
उहीँ हजुरकी प्यारी बैनी
(काठमाडौंको अनामनगरस्थित घट्टेकुलोमा भएको कुकर बम विस्फोटमा परि २०७६ जेठ १२ गते प्रज्ज्वल शाहीको निधन भएको थियो । बझाङ घर भएका शाही नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य तथा सीटीइभीटी इकाइका सभापति थिए ।
उनलाई नेकपाले सहिद घोषणा गरेको थियो । बझाङबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं छिरेका प्रज्वलले २ जना भाइहरु दिवस, विवस र एक बहिनीलाई पनि काठमाडौंमै पढाउन ल्याएका थिए । यीनै प्रिय दाई प्रज्वलको सम्झना उनकी बहिनी कलशाले लेखेको यो पत्र हामीले प्रकाशन गरेका हौं । (सम्पादक )
सरकार ! नवराज विकहरूलाई पुरस्कार होइन, न्याय चाहिएको छ
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटना मानव सभ्यतामाथि नै गरिएको तुच्छ परिघटना हो । यो जातीय विभेदविरुद्धको...
दलित आन्दोलन : केटाकेटीले खेल्ने भाडाकुटी खेल जस्तो हो र ?
रुकुम लगायत नेपालको विभिन्न ठाउँमा जातीयतालाई आधार बनाएर भएको हत्या र त्यसको विरुद्धमा भइरहेको आन...